HORONANTSARY NAPARITAKA TAMIN’NY FESIBOKY : Saron’ny Zandary ilay tovolahy nametaveta zazalahikely
Efa eo am-pelantanan’ny Zandarimariam-pirenena ankehitriny ilay tovolahy nametaveta zazalahikely, horonantsary naparitaka tamin’ny tambajotra fesiboky, ny faran’ny herinandro lasa teo iny. 12 octobre 2020
Tsy ela dia tratra ity farany ka ny sampana fitrandraham-baovao, fikarohana fandikan-dalàna, fiarovana ny zaza tsy ampy taona ary ny famotorana heloka bevava sy heloka anabaka eo anivon’ny Zandary no nisahana ny fitadiavana ny angom-baovao rehetra. Ao anatin’ny famotorana lalina momba ny raharaha tanteraka ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao.
Ilay zaza novetavetaina ihany koa dia efa eo am-pelatanan’ny ray aman-dreniny, izay mbola samy ao anatin’ny fanadihadiana avokoa mialoha ny hiakaran’ny raharaha any amin’ny Fitsarana. Tsy azo ekena ary melohin’ny lalàna mifehy eto Madagasikara tanteraka ny zava-nitranga ka tsy havela mora ny tranga toy ireny, raha ny fanazavana ihany. Arahina akaiky moa ny tohin’izany hatreto.